Myanmar Search International Service Co.,Ltd
ယခုလက်ရှိ နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ပညာရေး အနေနဲ့ကတော့ အားလုံးပုံမှန်နီးပါး ပြန်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံပေါ်တော့ မူတည်သေးတာပေါ့နော်။ အခုလက်ရှိအထိ Corona ပျံ့နှံဆဲရှိနေသေးတဲ့ နိုင်ငံကကျောင်းသား တွေကတော့ ကျောင်းကို တိုက်ရိုက်သွားရောက် သင်ကြားရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ online class နဲ့ပဲ ဆက်လက်သင်ယူနေရဆဲပါ။ ဒါပေမဲ့ Covid ကာလအတွင်း နိုင်ငံတကာပညာရေး အနေနဲ့ကတော့ ယခုခေတ်ကာလအရနိုင်ငံတိုင်းက Technology ကို အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ပညာရေးကို ဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက် သွားတာမျိုးတော့ မရှိကြပါဘူး။
ဆယ်တန်းအောင်းထားတဲ့ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာပညာရေး လမ်းကြောင်းတွေ အခွင့်အရေးတွေက အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ရမှတ်တွေပေါ်မူ တည်ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားကျောင်းတွေရဲ့ ပညာသင်ဆုတွေ ပညာသင်ထောက့်ပံ့ကြေးတွေ လျှောက်လို့ရပါတယ်။ အမတို့ MSI က အဲ့ဒီ့ပညာသင်ဆုအတွက်ပဲ အဓိကထားပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။ ဆယ်တန်းအောင်ကျောင်းသားတွေက နိုင်ငံခြားမှာ ကျောက်းတက်ချင်ရင် သက်ဆိုင်ရာ မိမိတက်ချင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ ကျောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီး သက်ဆိုင်ရာကျောင်းက တောင်းတဲ့ ဝင်ခွင့်တွေကို ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ ၁၀ တန်းအောင်လက်မှတ် ၊ အမှတ်စာရင်း၊ ဘာသာစကား၊ ပြီးတော့ ပညာသင်ဆုလျှောက်ချင်တဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက် အများအကျိုးပြု လုပ်ဆောင်မှုလေးတွေကို ပြင်ဆင်ထားရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ ပြည်ပကျောင်းတွေ အများစုကတော့ ဖွင့်နေကြပါတယ်။ ကျောင်း campus ကို တိုက်ရိုက်သွားတက်လို့ရတာနဲ့ Online နဲ့ သင်ယူရတာနဲ့ပဲကွာတာပါ။ ပြည်ပမှာ ကျောင်းဆက်တက်ချင်တဲ့ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကတော့ ကျောင်းဘက်ကို တိုက်ရိုက်သွားတက်ခွင့်မရလို့အချိန် ကုန်မှာစိုးရိမ်ရင် နေထိုင်စား သောက်စရိတ်လည်း သက်သာ အောင် လုံခြုံမှုလည်းရှိအောင် မိမိ နေအိမ်ကနေပဲ မိမိတက်ချင်တဲ့ နိုင်ငံရဲ့ကျောင်းကို online lea-rning အရင်လုပ်ပြီး တိုက်ရိုက် သွားတက်ဖို့ ပြင်ဆင်စောင့်ဆိုင်း နေရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် မြင်ပြီးသွားပြီးဆိုရင် ပုံမှန်ဆိုအစိုးရတက္ကသိုလ်တွေ မေဂျာတွေခွဲယူ ရတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာဘာ ကောင်းလာလဲဆိုတော့ ပုဂ္ဂလိက တက္ကသိုလ်တွေ စပြီးတော့ပေါ်လာပြီ အရင်ခေတ်ကလို မဟုတ်တော့ဘူး ပုဂ္ဂလိကပညာရေး ထွန်းကားလာပြီ ။ လုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုလဲ Digital Economy ဖြစ်လာပြီ ဆိုတော့ အိုင်တီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နည်းပညာရပ်တွေ လိုလာတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို စီမံခန့် ခွဲတဲ့နေရာမှာလဲ အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး။ အရင်တုန်းက ဆယ်တန်းလေးအောင်ပြီး ကျောင်းလေးတက် ဘွဲ့လေးတစ်ခုရ အလုပ်လေးတစ်ခုဝင်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝက လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ် ရောက်သွားတာပေါ့။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေပြီးသွားပြီဆိုရင် နောက်ထပ်ပညာရပ်တွေ ထပ်သိအောင် ဒီခေတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ ဒီ trend မှာရှိပြီး ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပညာရပ်တွေကို ထပ်သင်ရမယ်။ မသင်လို့ရှိရင် လူတွေတော်တော်များများက အင်တာဗျူးသွားဝင်တယ် အလုပ်မရဘူး အဲ့ပြသနာတွေ။ ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကို မသိတဲ့ပြဿနာ။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ changes တွေဖြစ်တယ် rapidly changes အရမ်းမြန်တယ် အခုရောဂါတွေ ဖြစ်နေတယ်ကွာ တစ်နှစ်လောက်တော့ ကျောင်းနား လိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးနော် သင်လို့ရတဲ့ပုံစံနဲ့ သင်လို့ရတယ်။ အခုက Industry 4.0 ဖြစ်နေပြီ အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ Industry 4.0 နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ဖို့အတွက် Education ကလိုက်ပြောင်းရတယ်။ လူတွေ ဘာကြောင့်အလုပ် မရလဲဆိုတော့ သင်တာတစ်ခု လုပ်တာတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ YIU မှာ Career နဲ့ပတ်သက်လို့ နှစ်လိုင်းရှိတယ် Computing ရှိတယ် Business Management ဆိုပြီးနှစ်လိုင်းရှိ တယ်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို ဘယ်လို စီမံခန့်ခွဲမလဲဆိုတာ Business Management, Computing ကတော့ အိုင်တီပေါ့ B.Sc (Hons) Business Computing & Information System) ဘဏ်တွေမှာ ကွန်ပျူ တာ တွေသုံးတယ်။ ဆေးရုံတွေမှာ ကွန်ပျူတာတွေသုံးတယ်။ ဒါကို Information system လို့သုံး တယ်။Business Computing လို့ရေးထားပေမဲ့ Business ဘွဲ့ မဟုတ်ပါဘူး။ အိုင်တီဘွဲ့ပါ။ ဒီဘွဲ့ကို အင်္ဂလန်နိုင်ငံ University of Central Lancashire က ပေးပါတယ်။ ဘယ်လိုလူတွေ တက်လို့ရလဲဆိုရင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီးရင် တက်လို့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက B.A (Hons) Business Management ပါ UK က Bucks New University က ပေးတဲ့ဘွဲ့ ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာဆယ်တန်း အောင်ပြီးသား ကလေးအတွက်အ တွက် အိုင်တီပဲတက်တက် business ပဲတက်တက် Level3(Bridge to University), Level4(University First Year), Level5(University Second Year), Level6(University Bachelor) ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ဆယ် တန်းအောင်ပြီးသား သူတွေအ တွက် Level4ကစတက်ပါ။ Level4ဟာ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး သားသူတွေအတွက် တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်နဲ့ တူပါတယ်။ Level5ဒုတိယနှစ်ကိုဆက်တက်ပြီးရင် အဲ့ဒါကို ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ HND Diploma လို့ခေါ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဆယ်တန်းကျသွားပြီး ဖြေနေတာ နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ရှိပြီ။မ အောင်ဘူး ဒါပေမဲ့ ပုဂ္ဂလိကပ ညာရေးကို လိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် Level3က စတက်ပါ။ ကိုးတန်းအောင်ဆို စတက်လို့ ရပါပြီ။ တစ်နှစ်အောင်ပြီးသွားရင် Level4ကို ဆက်တက်လို့ရပြီ။ ဆယ် တန်းမှမအောင်တာ ယူကေ ဒီ ပလိုမာကို တက်လို့ရလို့လား လို့ မေးပါလိမ့်မယ်။ရပါတယ်။ ကလေးစာမေးပွဲကျလို့ စိတ်ဓာတ် မကျပါနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ လာဆွေးနွေးပါ။ ယနေ့ခေတ်မှာ ကွန်ပျူတာ ပညာရပ်ကလည်း မရှိမဖြစ်လို အပ်သလို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းကလည်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်လို့ နေပါတယ်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် မြင်ပြီးသူများအတွက် UK မှ ပေးအပ်သော
B.Sc (Hons) Business Computing & Information Systems (UK)
HND Diploma in Computing (UK)
B.A (Hons) Business Management (UK) သို့မဟုတ်
HND Diploma in Business (UK)
ကွန်ပျူတာပညာရပ် B.Sc (Hons) Business Computing & Information Systems ဘွဲ့ကိုတော့ UK မှာ ရှိတဲ့ University of Central Lancashire က ပေးအပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း တက္ကသိုလ်ဟာ Centre for World University Rankings (CWUR) အရ ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ်ကြီးတွေရဲ့ ၃.၇ ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းမှာရှိပြီး Top UK University League Table 2020 အရ UK မှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေမှာ Ranking ရ၅ အဆင့်ရှိတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကြီးမားသော UK University တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘွဲ့ကို YIU ဟာ UK မှာ ရှိတဲ့ NCC ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းနှင့်ပူးပေါင်း၍ သင် ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်း ဆိုင်ရာပညာရပ် B.A (Hons) Business Management (UK) ဘွဲ့ကိုတော့ UK မှာရှိတဲ့ University of Buckinghamshire New University က ပေးအပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း တက္ကသိုလ်ဟာ Top UK University League Table 2020 အရ UK မှာ ရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေမှာ Ranking ၁၁၅ အဆင့်ရှိတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကြီး မားသော UK University တစ် ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘွဲ့ကို YIU ဟာ UK မှာ ရှိတဲ့ Magna Carta College Oxford ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီး သင် ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ ပညာရပ် B.Sc (Hons) Business Computing & Information Systems ဘွဲ့ကို တက်ရောက်ချင်သူတွေကတော့ HND Diploma in Computing ကို Level4နှင့် Level5ဆိုပြီး ၂ နှစ်တက်ရောက်ပြီး ပညာသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ၂ နှစ်ဟာ တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်နဲ့ ဒုတိယနှစ် ကို တက်ရောက်နေတာ ဖြစ်ပြီး YIU မှာ ပဲ တတိယနှစ် Level6Business Computing & Information Systems ကို တက်ရောက်ကာ University of Central Lancashire ကပေးအပ်တဲ့ B.Sc (Hons) Business Computing & Information Systems ဘွဲ့ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်း ၃ နှစ် တက်ရောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်း ဆိုင်ရာပညာရပ် B.A (Hons) Business Management ဘွဲ့ကို တက်ရောက်ချင်သူတွေကတော့ YIU မှာ HND Diploma in Business ကို Level4နှင့် Level5ဆိုပြီး ၂ နှစ်တက်ရောက်ပြီး ပညာသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ၂ နှစ်ဟာ တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်နဲ့ ဒုတိယနှစ်ကိုတက် ရောက်နေတာဖြစ်ပြီး YIU မှာပဲ တတိယနှစ် Level6Business Management ကို တက်ရောက်ကာ University of Buckinghamshire New University ကပေးအပ်တဲ့ B.A (Hons) Business Management (UK) ဘွဲ့ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါ တယ်။ စုစုပေါင်း ၃ နှစ် တက်ရောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
HND Diploma အထိပဲတက် ရောက်လိုသူတွေအတွက် HND Diploma in Computing ဖြစ်ဖြစ် HND Diploma in Business ဖြစ်ဖြစ် Level4and Level5ဆိုပြီး ၂ နှစ်တက်ရောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရပ် ၁၅ ဘာသာကို သင်ကြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကြေးအနေနဲ့ ပထမနှစ်အတွက် ၃၅ သိန်းနဲ့ ဒုတိယနှစ်အတွက် ၃၅ သိန်း ကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။ HND Diploma in Computing သို့မဟုတ် HND Diploma in Business ဟာ Vocational Training ဖြစ်တာကြောင့် အောင်မြင်ပြီးစီးပါက ၎င်း Diploma နဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်လို့ရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခြေခံတက်ရောက်ဖို့လိုအပ်ပြီး HND ပညာရေးဟာ Assignment ကို အခြေခံထားတာကြောင့် အဆိုပါပညာရပ်တွေ နဲ့ အခြားအခြေခံ ပညာရပ်တွေကို သင်ကြားဖို့အတွက် HND Foundation ကို ၄ လ အရင်ကြို တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကြေးနဲ့ Edexcel ကို Register လုပ်ရတဲ့ Fees နှစ်ခုပေါင်းကတော့ ၁၅ သိန်းကျပ် နှင့် USD470++ ဖြစ်ပါတယ်။
Foundation ကနေ HND Diploma ပြီးသည်အထိက ၂ နှစ်ခွဲခန့် Foundation ကနေ Bachelor ပြီးသည်အထိက ၃ နှစ်ခွဲခန့် ကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
University of Information Technology တွင် တက်ရောက် နိုင်သောဘာသာရပ်များ
B.C.Sc. (Software Engineering)
B.C.Sc. (Business Information Systems)
B.C.Sc. (Knowledge Engineering)
B.C.Sc. (High Performance Computing)
B.C.Tech. (Communication and Networking)
B.C.Tech. (Computer Systems)
ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွင် တက်ရောက်နိုင်သော ဘာသာရပ်များ
အမျိုးသား စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီ ဂရီကောလိပ်တွင် တက်ရောက်နိုင်သော သင်တန်းများ
Bahcelor of Business Management (BBM)
Bachelor of Arts (English for Professional Purpose)
Bachelor of Tourism and Hospitality (BTHM)
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် တက်ရောက်နိုင်သော ဘွဲ့များ
B.A (Myanmar) မြန်မာစာ
B.A (English) အင်္ဂလိပ်စာ
B.Sc (Mathematics) သင်္ချာ
B.Sc (Chemistry) ဓာတုဗေဒ
B.Sc (Biochemistry) ဇီဝဓာတုဗေဒ
B.Sc (Industrial Chemistry) ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒ
B.Sc (Physics) ရူပဗေဒ
B.Sc (Microbiology) အဏုဇီဝဗေဒ
B.A (Myanmar Studies) မြန်မာမှုပညာ
B.A (Geography) ပထဝီဝင်
B.ES (Environmental Studies) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လေ့လာမှုပညာ
B.A (History) သမိုင်း
B.A (Philosophy) ဒဿနိကဗေဒ
B.A (Psychology) စိတ်ပညာ
B.A (Oriental Studies) အရှေ့တိုင်းပညာ
B.A (International Relations) နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးပညာ
B.A (Political Science) နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ
B.A (Anthropology) မနုဿဗေဒ
B.A (Archeology) ရှေ့ဟောင်းသုတေသနပညာ
B.A (Library and Information Studies)စာကြည့်တိုက်နှင့် သုတပညာ
LL.B (Law) ဥပဒေပညာ
B.Sc (Zoology) သတ္တဗေဒ
B.Sc (Botany) ရုက္ခဗေဒ
B.Sc (Geology) ဘူမိဗေဒ
B.Sc (Computer Science) ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ
B.Sc (Fisheries and Aquaculture) ငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်